Studiocraft Studio Gear Setịpụrụ Iwu COVID-19 Ọhụrụ Maka oche ndị isi | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Studiocraft Studio Gear Setịpụrụ Iwu COVID-19 Ọhụrụ Maka oche ndị isi
N'ime naanị ọnwa abụọ, otutu agbanweela, ma na -ele anya oria ojoo a bụ COVID-19, ugbu a. Onye isi oche onye isi oche ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Ihe nkiri Studio Gear, ewepụtala ndụmọdụ nchekwa maka onye isi oche ojiji na ịfectomi ntuziaka maka usoro nchekwa. N’agweghari oche oche nke onye isi ugbu a na plastik, a na-ekwukwa n’ihi na plastik abụrụla ihe dị oke njọ maka gburugburu ebe obibi anyị n’ihe gbasara biodegradability. Nke a na - eme ka ihe bu oria ghara ibute. Ọmụmụ ihe ọmụmụ gara aga akọwaala etu nchekwa COVID-19 si dịte aka bụ nke kachasị ogologo mgbe ị na-eji plastik ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara. Osisi bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ọcha mgbe ọ na -ebelata ịdị omimi nke COVID-19, nke a chọpụtara na ọ kwụsiri ike ruo ụbọchị 7 na plastik ebe a na-enweghị ike ịchọpụta nje ahụ ka ụbọchị abụọ gachara. Nihi na osisi nwere ihe ndi eji agwo oria, o gosiputara uru dika nke megidere sayensi sayensi banyere etu COVID-2 nwere ike isi di ndu ogologo oge n’elu plastik, iko na igwe anaghị agba ubochi asaa.
Firstzọ izizi bụ inwe ihe ndochi ọhụrụ dochie anya ya onye isi oche. kwaaji nwekwara ike iji ncha na mmiri sachaa ya. Naanị ihe ọ ga-ewe bụ iji ncha were hichaa were nkeji 5 mee ihe, nke ga-emebi COVID-19 n’ụzọ dị n ’elu. Ihe ngosi oche onye isi osisi bụ nhọrọ dị mma maka ihe nkiri maka arụmọrụ a.
Ihe nkiri Onye nwe Studio Studio, Joe Iacobellis tụrụ aro ka usoro kacha mma nhicha oche oche onye isi bụ:
Fesa ya na antiseptik dị ka Lysol ka ọ kpọọ nkụ. Dkpọcha ihe na-ewekarị ihe na-erughị nkeji atọ
Jiri mmiri ọkụ ma hichaa kwaavasị. Ọtụtụ oche onye isi A na-eji akwa akwa na akwa akwa ma dịkwa mfe. Agbanyeghị, anyị anaghị akwado ịkụnye ha na ọkpọọ nkụ n'ihi na ọ nwere ike gbazee belata rọba na mpaghara oche oche. A na-atụ aro ịkpụcha ikuku
Jiri uzuoku kuzuchaa elu ya n’enweghi mmiri ogwu. Uzuoku, nke a na-ahụkarị na ihe nkiri na ụlọ ọrụ mgbazinye, bụ nnukwu ụzọ iji gbuo ngwa ngwa ọ bụla ma ọ bụ nje, Uzuoku ahụ ruru ogo 212F nke zuru oke iji kpochapụ nje ọ bụla ọ na-akpakọrịta. Ọ bụ usoro kachasị mma ma dị mfe nke enwere ike ikwugharị ugboro ugboro
Andzọ dịruru elu na ịdịte aka oche oche onye isi ahụ na àgwà ndị a abụrụla ezigbo ụzọ isi na steepụ studio ihe dị ka afọ 75. Etu osisi nke oche oche nwere ike iji mkpochapụ Lysol na / ma ọ bụ ndị ọzọ na-ehicha ya. Na kwaaji enwere ike kpochaa steepụ n'enweghị ihe ọ bụla mebiri emebi, yana ihe kpatara nke ahụ bụ n'ihi ịdị ike ha site na ihe siri ike nke ndị ọkpọkọ plastic ha na-enweghị.
A bịa na ahụike na nchekwa nke ndị ahịa ya. Ihe nkiri na-ewere ahụike na ahụike ha dị ka ihe dị mkpa. Ọ bụ ezie na enwere agụụ maka ịlaghachi na omume, Ihe nkiri jigide ihe ya di ka ihe ntukwasi obi, nke zuru oke, ma di ocha dika isi ihe nke ogba a ga-eme.
Iji nweta ihe omuma banyere Filiks na usoro nchekwa dị mkpa a na-ewere na nzaghachi COVID-19, gaa filmcraftla.com.
biodegradability kwaaji Covidien-19 onye isi oche oche onye isi Ihe nkiri Ihe nkiri Studio Gear Graham Chapman Prmoted toEditor Joe Iacobellis Litra Lysol Matthews ọrịa ihe nchekwa Ụgha & Akụrụ Ultra HD Forum 2020-05-11
Previous: Talks Tech: Otu NAB Show LIVE Special Edition - LIVE May 13-14, 2020
Osote: Mepụta4MentalHealth na-eme ka Stream Workflows na AJA HELO na-arụ ọrụ